Orinasa fanaovana akanjo ambony latabatra - Mpanamboatra latabatra misolo akanjo any Sina
Ny ambony dia misy efitrano telo misy fitaratra ambony tampony eo amin'ny faritra afovoany. Ny cubby ambony-tampon'ny sisin'ny zava-poana dia manome toerana malalaka hitahirizana makiazy na fidiovana fanamoriana.
Mampiavaka ny birao madio sy malama ary tongotra miolakolaka, io vanity maoderina maoderina io dia mifanentana amin'ny seza mahafinaritra sy fitaratra tsara tarehy mampamirapiratra toetra mahafinaritra! Miaraka amin'ny famitana volamena mamirapiratra sy ny fitaratra boribory, ity sombin-javatra ity dia manolotra endrika mahaliana.
LatinaEndrik'anarana amin'ny teny latina
Ny endrika endrika tsy manam-paharoa, tonga miaraka amin'ny zava-poana, fitaratra famirapiratana azo ovaina, seza misy cushion ary mpikarakara makiazy maimaimpoana. Ny vanity dia manana vatasarihana roa malalaka izay mahazaka ireo zava-dehibe ilaina amin'ny firavaka sy firavaka. Ity latabatra zava-poana sy fipetrahan'ny seza ity dia azo ampiasaina ao amin'ny efitranonao, trano fidiovana, efi-tranonao na lalantsara.
Manolo-tena izahay hamorona latabatra makiazy marefo sy azo ampiharina ary hanome anao safidy tsara kokoa. Ity latabatra makiazy fotsy ity dia vita amin'ny fitaovana avo lenta hanatsarana ny fitoniana sy ny faharetana 100%…
YF-T24 kabinetra firavaka BEDROOM VANITY
Famolavolana asymmetrika miaraka amin'ny tsipika madio, ary ny fotsy sy ny loko maitso dia manome vibe tsara tarehy nefa kanto amin'ny tranonao. Latabatra fisoloana akanjo tsy miankina natokana ho an'izao rehetra izao vehivavy.
Ny vanity napetraka dia multifunctional toy ny fahitalavitra misy Flip Up fitaratra eo amboniny.
Multi-functional-Misy toerana ampy ho an'ny makiazy isan'andro sy taovolo misy 2 Drawers & 4 talantalana. Ny latabatra koa azo ampiasaina ho toy ny fahitalavitra
YF-T22 haingo lamaody miendrika endrika sy mandeha amin'ny endrika Makeup + TV
Ny latabatra tsy misy fangarony vita amin'ny hazo fotsy manjelanjelatra sy ny seza dia mora mifanentana amin'ny haingon-tranoo, ny takelaka dia misy faran'ny fotsy izay ampiarahin'ny fototra volamena.
YF-T21 haingam-pandeha mavesatra lehibe Makeup Vanity + kabinetra mijoro amin'ny fahitalavitra
Ny setroka zava-poana dia misy fampiasa maro toy ny fahitalavitra misy fitaratra LED eo an-tampony.
YF-T20 Large Makeup Vanity + TV mitsangana kabinetra
Ny setroka zava-poana dia multifunctional ho toy ny fahitalavitra misy fitaratra LED eo amboniny.
Ny latabatra tsy misy fangarony vita amin'ny ala fotsy sy fotsy dia mora mifanentana amin'ny haingon-tranoo ny latabatra malalaka dia manana toerana malalaka ho an'ny mpikarakara, zavamaniry na borosy borosy.
Ny fananganana metaly, marbra faux, hazo matevina ary hoditra PU dia manome antoka ny fanohanana matanjaka, ny fampiasana maharitra ary ny traikefa ahazoana aina mandritra ny taona ho avy. Ity latabatra Miaraka amin'ny tsipika madio ity, famaranana fitaratra, ary ny Hollywood Mirror napetraka dia matanjaka, nefa tsara tarehy. Mijanona ao an-tranonao mihitsy.
Ny latabatra makiazy fotsy tsy misy fangarony miaraka amin'ny fitaratra famirapiratana azo ovaina, seza mihosin-dronono ary mpikarakara make-up maimaimpoana. FAMPISEHOAN-TSAINA MAZANA MAZAVA: apetaho eo amin'ny fitaratra ny jiro LED izay afaka mamadika hazavana voajanahary, hazavana mafana ary jiro mangatsiaka. Afaka misafidy hazavana hafa ianao arakaraka ny seho samihafa sy makiazy samihafa.